သင္လံုး၀ မသိထား တ့ဲ ဒိုင္းခင္ခင္ ဟာ သီေပါမ င္းရင္ေသြးလြယ္လ်က္ အသတ္ခံခ့ဲရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းမွန္ – Shwewiki.com
သီေပါ မင္း သည္ စုဖုရားလတ္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္၏ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပးမႈမ်ားအားသိ႐ွိပါေသာ္လည္း…… အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္႐ွိမိန္းမေခ်ာေလး ဒိုင္းခင္ခင္ အား ခ်စ္ခင္စံုမက္ပါေသာေၾကာင့္ ေျမာက္နန္းစံမိဖုရားအျဖစ္တင္ေျမာက္လိုသည္ဟု ဆိုလာသည္။
သို႔ေသာ္ ဒိုင္းခင္ခင္ ၏မိဘမ်ားသည္ စုဖုရားလတ္၏ အႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္လွပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္သည့္အခါ …. သီေပါမင္းသည္… မိမိတာ၀န္ယူေၾကာင္း စုဖုရားလတ္ အား တျဖည္းျဖည္း ေျပာ၍အသိေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
အကယ္၍ ဒိုင္းခင္ခင္ အေပၚ၌စုဖုရားမွ အႏၲရာယ္တစ္စံုတစ္ရာ က်ေရာက္ေစခဲ့ပါမူ … …. မိမိသ ည္ ထီးနန္း အား လက္လႊတ္ ဆံုး႐ွံုးေစၿပီး တိုင္းျပည္ ပ်က္ပါေစေျကာင္း ကတိသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ပါသည္….။
စုဖုရားလတ္တြင္ ဒုတိယသမီးေတာ္ဖြားျမင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ သီေပါမင္းမွ ဒိုင္းခင္ခင္အား ခ်စ္ခင္စံုမက္ေၾကာင္း ေျမာက္နန္းစံ ထားလိုေၾကာင္း စုဖုရားအား ဖြင့္ေျပာလိုက္စဥ္ အျမတ္ေတာ္႐ွေသာ္လည္း
ခ်က္ခ်င္းထိန္းကာ အေျခေနအား ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ….သီေပါမင္းတိုင္းျပည္ေရး အနည္းငယ္ စိတ္ေထြေနခ်ိန္တြင္ စုဖုရား သည္ ဒိုင္းခင္ခင္ အား ကြက္မ်က္ေစခဲ့သည္။ဒိုင္းခင္ခင္ အား နန္း၀တ္နန္းစားမ်ားအား ခြၽတ္ေစၿပီး ေျမျပင္တြင္ဒူးေထာက္ကာ လက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ ဦးေခါင္း အားေမာ့ေစၿပီး ၀ါးစိမ္းဒုတ္ျဖင့္ လည္ၿမိဳအား႐ိုက္ကာ ကြက္မ်က္မိန္႔ခ်ခဲ့သည္။ …
ထိုခ်ိန္တြင္ဒိုင္းခင္ခင္၏ေနာက္ဆံုးဆႏၵအား ေျပာခြင့္ေပးရာတြင္ သီေပါဘုရင္ မ်က္ႏွာေတာ္အား တႀကိမ္မွ်ဖူးခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္…။ သို႔ေသာ္…သီေပါမင္းမွလာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ မိမိ က်ိန္ဆိုခဲ့သည္ မ်ားကိုလဲ ဥပကၡာျပဳခဲ့သည္။
ဒိုင္းခင္ခင္မွ မိမိ သည္ သီေပါမင္း ၏ ကိုယ္၀န္ အားေဆာင္ထားခ်ိန္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ရင့္မာေနေသာ ကိုယ္၀န္အား မီးရွဴးသန္႔စင္ေမြးၿပီးပါမွ ကြပ္မ်က္ပါရန္ ေတာင္ဆိုခဲ့ပါသည္။ …
၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ညတြင္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ မုန္းတိုင္းက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္ညလံုးနီးပါးေကာင္းကင္ယံမွ ၾကယ္မ်ားတျဖဳတ္ျဖဳတ္ေႂကြခဲ့သည္။
သဘာ၀တရားႀကီးကပင္လွ်င္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မလွမပ အဆံုးသတ္ျခင္းကို ငိုေႂကြးေနသေယာင္ ထင္ရသည္….။ … ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာဘုရင္ အ႐ွင္ႏွစ္ပါးအား အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သူရိယသေဘာၤျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ေခၚယူလာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ကုန္းေဘာင္ ဘုရင္စနစ္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္။
… လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္… သီေပါမင္း နွင့္ စုဖုရား ပါေတာ္မူခဲ့သည့္ေန႔မွ ႏွစ္ေပါင္း ( ၁၃၁ ) တိတိတိုင္ခဲ့ပါၿပီ..။
သီပေါ မင်း သည် စုဖုရားလတ် တစ်လင်တစ်မယားစနစ်၏ ပြင်းထန်သော အပြစ်ပေးမှုများအားသိရှိပါသော်လည်း…… အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းမချောလေး ဒိုင်းခင်ခင် အား ချစ်ခင်စုံမက်ပါသောကြောင့် မြောက်နန်းစံမိဖုရားအဖြစ်တင်မြောက်လိုသည်ဟု ဆိုလာသည်။
သို့သော် ဒိုင်းခင်ခင် ၏မိဘများသည် စုဖုရားလတ်၏ အန္တရာယ်ကို ကြောက်လှပါကြောင်း လျှောက်တင်သည့်အခါ …. သီပေါမင်းသည်… မိမိတာဝန်ယူကြောင်း စုဖုရားလတ် အား တဖြည်းဖြည်း ပြော၍အသိပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်
အကယ်၍ ဒိုင်းခင်ခင် အပေါ်၌စုဖုရားမှ အန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ ကျရောက်စေခဲ့ပါမူ … …. မိမိသ ည် ထီးနန်း အား လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးစေပြီး တိုင်းပြည် ပျက်ပါစေကြောင်း ကတိသစ္စာ ကျိန်ဆိုခဲ့ပါသည်….။
စုဖုရားလတ်တွင် ဒုတိယသမီးတော်ဖွားမြင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သီပေါမင်းမှ ဒိုင်းခင်ခင်အား ချစ်ခင်စုံမက်ကြောင်း မြောက်နန်းစံ ထားလိုကြောင်း စုဖုရားအား ဖွင့်ပြောလိုက်စဉ် အမြတ်တော်ရှသော်လည်း
ချက်ချင်းထိန်းကာ အခြေနေအား စောင့်ကြည့်ရင်း ….သီပေါမင်းတိုင်းပြည်ရေး အနည်းငယ် စိတ်ထွေနေချိန်တွင် စုဖုရား သည် ဒိုင်းခင်ခင် အား ကွက်မျက်စေခဲ့သည်။ဒိုင်းခင်ခင် အား နန်းဝတ်နန်းစားများအား ချွတ်စေပြီး မြေပြင်တွင်ဒူးထောက်ကာ လက်ပြန်ကြိုးတုတ် ဦးခေါင်း အားမော့စေပြီး ၀ါးစိမ်းဒုတ်ဖြင့် လည်မြိုအားရိုက်ကာ ကွက်မျက်မိန့်ချခဲ့သည်။ …
ထိုချိန်တွင်ဒိုင်းခင်ခင်၏နောက်ဆုံးဆန္ဒအား ပြောခွင့်ပေးရာတွင် သီပေါဘုရင် မျက်နှာတော်အား တကြိမ်မျှဖူးခွင့် တောင်းခံခဲ့သည်…။ သို့သော်…သီပေါမင်းမှလာရောက်ဖူးမျှော်ခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ မိမိ ကျိန်ဆိုခဲ့သည် များကိုလဲ ဥပက္ခာပြုခဲ့သည်။
ဒိုင်းခင်ခင်မှ မိဘ များခြေနေမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် အဆင်ပြေကြကြောင်းသတင်းစကားရရှိပါသော်လည်း…ထိုအချိန်တွင် ဒိုင်းခင်ခင် ၏ မိဘ များအား စုဖုရားလတ် အမိန့်တော် နှင့်ကွပ်​မျက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဒိုင်းခင်ခင် သိမသွားခဲ့ရှာပေ…။
ဒိုင်းခင်ခင်မှ မိမိ သည် သီပေါမင်း ၏ ကိုယ်ဝန် အားဆောင်ထားချိန် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရင့်မာနေသော ကိုယ်ဝန်အား မီးရှူးသန့်စင်မွေးပြီးပါမှ ကွပ်မျက်ပါရန် တောင်ဆိုခဲ့ပါသည်။ …
တိုင်တားမင်းကြီးမှလည်း ဘုရင့်သွေးသားတော် အား ကွပ်မျက်ခဲ့သော် တိုင်းပြည်ပျက်တတ် သောအယူရှိကြောင်း သံတော်ဦးတင် လျှောက်ထားပါသော်လည်း စုဘုရား၏ အမိန့်အာဏာအားမလွန်ဆန်နိုင်သော သီပေါမင်းမှာ တားဆီးခဲ့ခြင်းမရှိပေ…။
(ထိုစဉ် နန်းတွင်းပုရောဟိတ်များမှ ဒိုင်းခင်ခင် သည် သီပေါမင်း အား သားတော်လေး ဖွားမြင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသားတော်လေးသည် ထီးမွေနန်းမွေဆက်ခံ မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်သာယာဝ ပြောစည်ပင်တိုးတတ်အံ့ဟု နိမိတ်ဖတ်ခဲ့သည်။)
ထိုနိမိတ်ကြောင့် သမီးတော်များသာ မွေးထားသောစုဖုရားသည် မိမိနေရာအာဏာ မရတော့သည်များအား စိုးရိမ်ကြီးကာ တို်င်တားမင်းကြီး တားနေသည့်ကြားမှ ဒိုင်းခင်ခင် အား အမြန်ကွက်မျက်စေခဲ့သည်။
ဒိုင်းခင်ခင် မှ ကံတော်မကုန်ခင်အချိန်တွင်းတွင် မိမိအားသစ္စာကျိန်ဆိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သော မိမိ ချစ်မြတ်နိုးရပါသော သီပေါဘုရင် အား ရည်မှန်းဦးချခဲ့ပြီး သစ္စာများမစူးရှပါစေရန် မျက်ရည်များဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့သည်…။
သဘာဝတရားကြီးကပင်လျှင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက် မလှမပ အဆုံးသတ်ခြင်းကို ငိုကြွေးနေသယောင် ထင်ရသည်….။ … ၁၈၈၅ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာဘုရင် အရှင်နှစ်ပါးအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သူရိယသဘောင်္ဖြင့် ပင့်ဆောင်ခေါ်ယူလာခဲ့ပြီး မြန်မာ ကုန်းဘောင် ဘုရင်စနစ် ပြတ်တောက်ခဲ့သည်။
… လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်… သီပေါမင်း နှင့် စုဖုရား ပါတော်မူခဲ့သည့်နေ့မှ နှစ်ပေါင်း ( ၁၃၁ ) တိတိတိုင်ခဲ့ပါပြီ..။